Fandraharahana madinika: ronono manara-penitra | NewsMada
Fandraharahana madinika: ronono manara-penitra
Par Taratra sur 15/01/2020
Niainga tamin’ny kely! Omby iray ny nompian-dRazafindrainibe Mbolatiana, 12 taona lasa izao, nanombohany amin’ny sehatry ny fiompiana eny Soavina Atsimondrano, nanangana ny orinasa 3è mi-temps. Ankehitriny, miisa 20 ny ombivavy beronono ompiany ka fito ny manome ronono 20 litatra isan’andro isanisany, ahazoana 140 litatra isan’andro.
Mivarotra ronono ny tena ataony, mahatratra 800 l/isan’andro, ka avy any amin’ny mpiompy hafa, miisa 12, avy any andrefan’Antananarivo (Ambohijafy, Alakamisy Fenoarivo, Antanetikely, Ampahitrosy,…) ny 650 litatra amin’ireo. Miisa efatra, eny Soavina, Anosizato (3) ny toeram-pivarotana ronono tantanin’ny 3è mi-temps, ary hisy faninefany vaovao hisokatra tsy ho ela eny amin’ny Pavillon Analakely.
Mampiavaka azy, hentitra ny fanajana ny kalitaon’ny ronono vokariny sy ny raisiny satria tsy maintsy atao fitiliana ao amin’ny laboratoarany daholo. Nahavitana izany ny tohana avy amin’ny fandaharanasa Malagasy Dairy Board (MDB) sy ny Vondrona eoropeanina, nampiofana sady namatsy fitaovana manokana azy, toy ny kojakoja ilaina amin’ny laboaratoara, vilany be (tank) fampangatsiahana, hitahirizana ny ronono hanana hafanana tsy mihoatra ny 4°C.
Azo fantarina ny mitampo-drano
Araka ny fanadihadian’ny MDB, mitampo-drano avokoa ny 90%-n’ny ronono amidy atsinjarany eto an-dRenivohitra. Nilaza Razafindrainibe Mbolatiana fa antony mety mahatonga izany, misy amin’ireo ronono ny avy any amin’ny toerana lavitra an’Antananarivo, asian’ny tompony vongana lagilasy ao anatin’ireny sinibe plastika ireny satria tsy manana ilay vilanibe (tank), mitazona hafanana 4°C. Mitsonika ny lagilasy ka manampoka ny ronono avy eo. Misy koa anefa ireo tena manao fanahy iniana hampitomboana ny varotra.
Maro ny dingana siantifika atao ao amin’ny laboratoara, hitiliana ny kalitaon’ny ronono. Sedraina amin’ny alikaola karazany roa (70°C sy 90°C), jerena ny hakitroka (densité), ny tahan’ny asidra (acidité) ary ny fahasalaman’ny ombivavy amin’ny alalan’ny ronono avoakany.